Monday February 04, 2019 - 11:43:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Calamo ka sameysan saliib oo ka tarjumayo kaniisadda Faatikaanka ee madaxda u ah Mad-habka Kaatooliga Kirishtaanka caalamka ayaa lagu xardhay magaalada Abuu Dubai ee wadanka isku tagga imaaraadka carabta kana mid ah dhulka jaziiradda carabta ee Nabig
Calamo ka sameysan saliib oo ka tarjumayo kaniisadda Faatikaanka ee madaxda u ah Mad-habka Kaatooliga Kirishtaanka caalamka ayaa lagu xardhay magaalada Abuu Dubai ee wadanka isku tagga imaaraadka carabta kana mid ah dhulka jaziiradda carabta ee Nabiga SCW uu ka dardaarmay in mushrikiinta laga saaro.
Boob Faransiis oo ah madaxa faatikaanka ayaa si heer sare ah loogusoo dhoweeyay wadanka UAE oo ay kajirto dowlad sida saliibiyiinta oo kale udhaqanta cadaadis adagna ku heysa dadka muslimiinta ee ku dhaqan jaziiradda carabta iyo wadamada caalamka islaamka.
Hoggaamiyaha gaalada ayaa booqashadiisa ku sifeeyay taariikhi astaan u ah wax uu ugu yeeray nabadda bariga dhexe isagoo niyadda ugu dajiyay gaalada xoogga lagu dajiyay jaziiradda carabta in ay helayaan aqoonsi iyo tabantaabo caalami ah.
waxaa lafilayaa in dad gaaraya 120 kun oo Nasaaro kaathoolig ah uu ugu khudbeeyo magaalada Zaayad ee ciyaaraha halkaas oo ay ku taal kaniisadda saanta maariyo ee ay leeyihiin dadka Kirishtaanka ee xoogga lagu dajiyay dhulka jaziiradda carabta.
Hoggaamiyaasha ka socda gaalada faatikaanka ayaa ku amaanay dowladda imaaraatka carabta in ay wadankeeda u ogolaatay in kaniisado lagu dhiso laguna amaan gelo gaalada, sidoo kale waxay imaaraatka ku sheegeen dowlad iscafinta diimaha ka shaqeysa waana arrin muujinaysa sida dowladda imaaraatka ay uraalli gelisay Kirishtaanka caalamka una dhibaateynayso muslimiinta.
Boob Faransiis wuxuu sheegay in booqashadiisu jawaab celin u tahay martiqaad uu ka helay dhaxal sugaha imaaraatka carabta ahna wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Maxamed bin zaayad sanaddii 2016 oo mas'uul ka ahaa ruqsad siinta in kaniisado waaweyn laga dhiso dhulka jaziiradda carabta.
Sawir lagu xardhay calaamadda kirishtaanka iyo sanam ay ugu yeereen in uu yahay Maryama Bin Cimraan ayaa laga ag suray masjid kuyaal magaalada Abu Dubai taas oo jees jees ku ah muslimiinta.
warbixinadu waxay sheegayaan in dad kabadan 2 milyan oo qof kirishtaan ah ay hadda deegaansanayaan wadanka imaaraatka carabta waxayna tiradoodu sii badatay 5tii sanadood ee ugu dambeysay waxaana sii dheer dad mushrikiin hinduus ah oo 4 malyan gaaraya.